5 Famous Theaters In Eoropa | Mitsitsia lamasinina fitsangatsanganana any Eoropa
Theaters malaza any Eoropa dia voarary amin'ny lamba ny Eoropeana kolontsaina. Teatra malaza any Eoropa Mampanantena anareo fampisehoana miavaka. Ho handao anao nahatonga, nafindra, ary spellbound! Ny toetry ny fanaovana zavakanto dia mihelina sy ny famoronana miroborobo mahavariana. Ireo tselatry ny famirapiratana velona ihany eo amin 'ny fahatsiarovany. Teatra malaza any Eoropa miteraka ny fahatsapana ny fanavahana sy ny fahita firy. Izany dia fotoana fohy amin'ny fotoana ifanakalozana, ary dia te-Miaina ao amin'ny fahazavan'ny ny hazavana.
Maro amin'ireo mpihira lehibe ny lasa, ny farany dia roan-jato taona, efa nahatanteraka eto. Maro opéra malaza no nanana ny famokarana voalohany eto toy ny Othello, Nabucco avy amin'i Verdi, ary Madame Butterfly avy amin'i Giacomo Puccini.
The Globe Theater dia fantatra amin'ny anarana hoe Shakespeare Globe. Mety afa-po ireo mpankafy ny The Bard dia tsy maintsy hitsidika io teatra malaza any Eoropa. William Shakespeare ny asa mampiseho ny fahatakarana lalina olombelona. Ny asany captivates mpijery. Ny fifehezana ny teny anglisy no nanao ny tsehatra sy tsy mety lany andro tononkalo tapa-halalinan-tsainy.
Ny Latina Paradis dia vanim-potoana ankehitriny cabaret ho avy izany no mpandimby ny Teatra Latina tany am-boalohany. Ny teny latinina no naniraka Theater am-piandohana tsy nisy hafa noho Napoleon Bonaparte ao amin'ny 1800s.
Ny Volkstheater any Vienne dia tsara tarehy fahitana mijery. Tsy nisokatra voalohany tao 1889. Izy io dia iray amin'ireo lehibe indrindra amin'ny karazany eran'izao tontolo izao any amin'ireo firenena miteny Alemanina ary tsy maintsy jerena.
Tianao ve mba hiraketana ny bilaogy lahatsoratra “5 Famous Theaters In Eoropa” tao amin'ny toerana? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: ny https://iframely.com/embed/https: //www.saveatrain.com/blog% Nyawang- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
#teatra ParadisLatin fampisehoana Teatro alla Scala teatra TheGlobeTheatre Train Travel Volkstheater